စျေးနှုန်းချိုသာသောမီးသတ်ဆေးကြောသန့်စင်ထုတ်လုပ်သူနှင့်ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ weierxin လုံခြုံ
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > သေနတ် Safe
သေနတ်ပိုင်ရှင်ဖြစ်ခြင်းသည်တာဝန်များစွာနှင့်အတူလာသည်။ သင်၏သေနတ်များကိုကောင်းစွာအသုံးပြုရန်, သန့်ရှင်းရေးနှင့်မည်သို့ဂရုစိုက်ရမည်ကိုသင်သိရမည်။ သင့်ရဲ့သေနတ်တွေကိုမှားယွင်းတဲ့လက်ထဲကနေစောင့်ရှောက်ဖို့တာဝန်ရှိတယ်။ ကလေးများ, ရာဇ0တ်သားများနှင့်အခြားခွင့်ပြုချက်မရှိသောလူပုဂ္ဂိုလ်များလှူဒါန်းရန်သင်သည်၎င်းတို့အားစနစ်တကျလုံခြုံမှုရှိရမည်'t ကိုဝင်ရောက်ခွင့်ရှိသည်။ သေနတ်များသည်သင့်အားသင်၏သေနတ်များကိုထိန်းသိမ်းထားခြင်း,
Weierxin Safe သည် (10) နှစ်ကျော်သက်ဆိုင်မှုများ0င်ငွေများထုတ်လုပ်ခြင်းအတွေ့အကြုံကိုပိုင်ဆိုင်သည်။ ၎င်းတွင်ရွေးချယ်ရန်မီးနှိပ်ခံနိုင်သော safe options အမျိုးမျိုးရှိသည်။ ငါတို့မှာစတိုင်လ်3ခုရှိတယ် သေနတ် Safe- သေနတ်ဗီရိုများ, မီးနှိပ်နိုင်သည့်ရိုင်ဖယ် Safe Safe နှင့် Handgun Safe Safe ။
သေနတ်ဗီရိုများသည်အပြည့်အဝလွတ်လွတ်လပ်လပ်သေနတ်ဘေးကင်းလုံခြုံမှုအတွက်စျေးသိပ်မကြီးသည့်ရွေးချယ်စရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ သေနတ်ဂေါ်ကားများသည်မီးအဆင့်သတ်မှတ်ချက်နှင့်လေးနက်သောဖောက်ထွင်းမှုကာကွယ်မှုမရှိခြင်းနှင့်လေးနက်သောဖောက်ထွင်းမှုကာကွယ်မှုမရှိသော်လည်းသေနတ်လုံခြုံရေး0က်သည်သင်၏သေနတ်နှင့်ခဲယမ်းမီးကျောက်များကိုပိတ်ဆို့ခြင်းနှင့်ပေါ့ပေါ့ပါးပါး guest ည့်သည်များအားတားဆီးရန်မယုံနိုင်လောက်အောင်အလုပ်တစ်ခုလုပ်သည်။
မီးနှိပ်နိုင်သည့်ရိုင်ဖယ်သည် 30-120 မိနစ်မှ 20 မိနစ်မှ 20 မိနစ်မှ 20 မိနစ်မှစတင်ခြင်းနှင့် 1 မှ 100 ရိုင်ဖယ်များမှမည်သည့်နေရာတွင်မဆိုသိုလှောင်နိုင်သည့်သေနတ်ဖြင့်ပစ်ခတ်မှုများဖြင့်ပစ်ခတ်မှုနှုန်းဖြင့်ဖြစ်သည်။ ၎င်းတွင်သင်၏အဖိုးတန်ပစ္စည်းများကိုကာကွယ်ရန်အတွက်အထူးဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသောကော်ဇောအတွင်းပိုင်းရှိပြီး၎င်းတို့ကိုစောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့်ခြစ်ရာများမှကင်းဝေးစေရန်စောင့်ရှောက်ခြင်း,
Handgun Safe များသည်သင့်လျော်သောသိုလှောင်မှုနှင့်ပစ္စတိုများအတွက်သင့်တော်သောသိုလှောင်မှုနှင့်ကာကွယ်မှုပေးရန်အဆင့်မြင့်လုံခြုံရေးအင်္ဂါရပ်များဖြင့်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ အစိုင်အခဲသံမဏိဆောက်လုပ်ခြင်းဖြင့်တည်ဆောက်ခြင်းဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏သေနတ်များသည်ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲဝင်ရောက်ခြင်းနှင့်ခိုးမှုကိုကာကွယ်ရန်လုံလောက်သောတာရှည်ခံသည်။ အဆင့်မြင့်သော့ခတ်ထားသောနည်းပညာ, Compression Gas Struts နှင့်အတွင်းပိုင်းအလင်းရောင်ဆိုင်ရာအင်္ဂါရပ်များသည်သင်လိုအပ်သည့်အခါသင်၏သေနတ်များကိုသတိပညာရှိရာတွင်ဂရုပြုပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ပစ္စတို Safe များသည်သင်၏လိုအပ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီရန်အရွယ်အစားအမျိုးမျိုးနှင့်ထူးခြားသောသော့ခတ်ထားသောအင်္ဂါရပ်များဖြင့်ရရှိနိုင်သည်။
အကောင်းဆုံးလက်ဗွေလက်ဂွန်ကို Safe Box ကို G2 မှာလျင်မြန်စွာ Access ကိုအိတ်ဆောင်ကုမ္ပဏီ - Weierxin ကို Safe
မော်ဒယ်မ .: G2 မှာSize: H100 * W360 * D280 မီလီမီတာN.W .: 4.0kgသံမဏိပစ္စည်းအထူ: တံခါး - 3.0 မီလီမီတာ, ခန္ဓာကိုယ် - 1.3mm